दिपेन्द्रको यस्तो थियो अग्रेजी, उनको गीत गाउँदाको स्वर ! उनको आवाज सहित (भिडियो) « गोर्खाली खबर डटकम
दिपेन्द्रको यस्तो थियो अग्रेजी, उनको गीत गाउँदाको स्वर ! उनको आवाज सहित (भिडियो)
दीपेन्द्र वीर विक्रम शाह (नेपालका तेह्रौ राजा हुन् । उनी सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा छोटो समय राजा हुने व्यक्ति हुन् । दरवार का ण्ड पछि यिनी अर्धमृ त अवस्थामि राजा घोषित गरियाका थिए त्यइको तेस्रो दिन यिनलाई मृ त घोषित गरियो । दरवार का ण्डको जाँचबुझ गर्न बन्याको आयोगको रिपोर्ट अनुसार सो ह त्याका ण्डमि राजा बीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य लगायत राजपरिवारका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई यिनैले चलायाका थिए भन्ने निष्कर्ष निकालिया थियो । ईतिहासमि यसाे भनिया पनि दरबार का न्डमा उन्कै भाइ ज्ञानेन्द्रको हात रयाको नेपाली सर्भसाधारणकाे बिस्वास रयाछ । दीपेन्द्र नेपालका राजा बीरेन्द्र रे रानी ऐश्वर्यका जेठा छोरा थिए। यिनी अविवाहित अवस्थामा नै मा’रिए।
यसरी भयो दीपेन्द्रको ह त्या
१९ जेष्ठ २०५८ मा तत्कालिन युवराज दीपेन्द्र शाहको ह त्या भएको थियो । औपचारिक छानविनले राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यासहित राजपरिवारका सदस्यहरुमाथि गो ली चलाएपछि दीपेन्द्रले आ त्मह त्या गरेका थिए । तर, यसमा धेरै आशंका र प्रश्नहरु उठे । बाहिर फैलिएको हल्लाअनुसार दिपेन्द्रको देव्रे टाउकोमा गो लीको दाग थियो । अर्थात उनलाई गो ली देव्रे टाउकोमा लागेको थियो । जबकि उनी दाहिने हात प्रयोग गर्थे । दाहिने हात चलाउनेले कसरी देव्रे टाउकोमा आफै गो ली हान्न सक्छन् ? यसर्थ धेरैको विश्वास छ, दरबार का ण्डमा दिपेन्द्रको संलग्नता बनावटी कुरा मात्र हुन् ।
धेरै नेपाली नागरिकहरू यसलाई रहस्यमय का ण्डकै रूपमा लिन्छन् । यस्ता दाबी समेत आएका छन् जसमा दुई व्यक्ति जसले युवराज दिपेन्द्रको मुखुण्डो लगाएका थिएले दरबार का ण्डको विध्वसं म च्चाएका थिए । दरबार का ण्डमा दश राजपरिवार सदस्यको ह त्या भएको थियो । यो आधुनिक नेपलाको कहालीलाग्दो घ टना हो । यो अत्यन्त रह स्यमय घ टना हो । धेरै नेपाली नागरिकहरू यसलाई रह स्यमय ह त्याका ण्डकै रूपमा लिन्छन् । यस्ता दाबी समेत आएका छन् जसमा दुई व्यक्ति जसले युवराज दिपेन्द्रको मुखुण्डो लगाएका थिएले दरबार का ण्डको वि ध्वसं मच्चाएका थिए । दरबार का ण्डमा दश राजपरिवार सदस्यको ह त्या भएको थियो । यो आधुनिक नेपलाको कहालीलाग्दो घ टना हो । यो अत्यन्त रहस्य मय घ टना हो ।
सरकारी आधिकारिक भनाइअनुसार दिपेन्द्रले नै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई आ मसंहार गरेका थिए । किनभने उसको विवाहको बारेमा परिवारमा विवाद चुलिएको थियो । विवाद सृजनाले उनी अत्यन्त रूस्ट थिए । दिपेन्द्रको चाहना थियो दुलहीको रूपमा देवयानी राणालाई दरबार भित्याउने । देवयानी राणा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाका छोरी हन् । राणा वेराज इतिहासमा पशुपती शम्शेर राणाहरू ‘ग’ वर्गका राणाहरू हुन् । राणा र शाह खानदानबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुने एउटा परम्परा थियो । यद्यपि, राजपरिवारका शाहहरूले ‘क’ वर्गका राणाहरूस“ग मात्रै विवाह गर्दथे । ‘क’ श्रेणीका राणाहरूले आफूलाई श्री ३ घोषित गर्दै २००७ साल सम्म नेपालमा आफ्नो शाषन चलाएका थिए । जसलाई हामी १०४ वर्षको राणा शासन भनेर बुझ्दछौं । यी दुई महाराज वंशजहरूको नेपालमा वैवाहिक सम्वन्धको लामो इतिहास छ ।
सरकारी छानविन आयोगको भनाइअनुसार देवयानीसँग विवाह गर्ने दिपेन्द्रको चाहना विरूद्व उनकै आमा रानी ऐश्वर्य उभिएकी थिइन् । यसैकारण, दिपेन्द्रले नियमित शाहीभोजमा परिवारको ह त्या गरिदिएका हुन् । उसबखत उनले धेरै मा दकप दार्थ पिएका थिए । मृ तकहरूमध्ये दिपेन्द्रका बुवा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, आमा, भाइ र बहिनी पनि थिए । भनिन्छ— त्यसपछि दिपेन्द्रले आफ्नै टा उकोमा पेस्तोल प ड्का ए । दिपेन्द्रले तीन दिनसम्म कोमामा मृ त्युसँग सङ्घर्ष गरे । यसै बेला अस्पतालको शैयामै उनलाई राजा घोषित गरिएको थियो । उनको जुन ४ मा मृ त्यु भयो । लगत्तै उनका काका युवराज ज्ञानेन्द्र राजा भए ।
भोलि फागुन १६ गते नेपाल बन्दको घोषणा, हेर्नुहोस बिस्तृतमा